भगवान मा विश्वास - भगवान स्विट्जरल्याण्ड को विश्वव्यापी चर्च
हाम्रो बारे > WKG लाई विश्वास गर्नुहोस् > भगवान मा विश्वास
परमेश्वरमा विश्वास भनेको परमेश्वरबाटको वरदान हो, जुन उहाँको अवतार पुत्रमा जडिएको छ र पवित्र शास्त्रीमा पवित्र आत्माको गवाही मार्फत उहाँको अनन्त वचनबाट चम्किन्छ। परमेश्वरमाथिको विश्वासले मानव हृदय र दिमागलाई परमेश्वरले अनुग्रहको उपहार, मुक्तिलाई ग्रहणयोग्य बनाउँदछ। येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्माको माध्यमबाट विश्वासले हामीलाई आत्मिक रूपले साम्प्रदायिक र परमेश्वर हाम्रा पिताप्रति वफादार हुन सक्षम गर्दछ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो विश्वासको लेखक र अन्त्यकर्ता हुनुहुन्छ, र यो विश्वासद्वारा हो, काम गर्दैन, अनुग्रहबाट हामीले मुक्ति पाउँछौं। (एफिसी २:;; प्रेरित १::;; १:2,8:२:15,9; रोमी १२:;; यूहन्ना १: १,;; प्रेरित :14,27:१:12,3; रोमी १०:१:1,1.4; हिब्रू ११: १; रोमी:: १-२; १:१:3,16) ; 10,17.२१-२11,1; ११..5,1; एफिसी :2:१२; १ कोरिन्थी २.;; हिब्रू १२.२)
विश्वासमा परमेश्वरलाई जवाफ
भगवान महान र राम्रो छ। आफ्ना जनहरूप्रति प्रेम र कृपाको प्रतिज्ञालाई बढवा दिनको लागि परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यको शक्ति प्रयोग गर्नुहुन्छ। उहाँ नम्र, मायालु, रिसाउनमा ढिलो र अनुग्रहमा धनी हुनुहुन्छ।
यो राम्रो छ, तर यो हाम्रो लागि कसरी प्रासंगिक छ? यसले हाम्रो जीवनमा कस्तो फरक पार्छ? शक्तिशाली र नम्र दुवैलाई हामी कसरी जवाफ दिने? हामी कम्तिमा दुई तरिकामा प्रतिक्रिया दिन्छौं।
यदि हामी जान्दछौं कि ईश्वरसँग आफूले चाहेको जेसुकै गर्न शक्ति छ, र उहाँ त्यो शक्तिलाई मानवतालाई आशीर्वाद दिन प्रयोग गर्नुहुन्छ, तब हामी पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सक्छौं कि हामी असल हातमा छौं। उहाँसँग हाम्रो विद्रोह, हाम्रो घृणा, र उहाँ विरुद्ध र एकअर्काको बिरूद्ध हाम्रो विश्वासघात लगायत सबै कुराको लागि हाम्रो उद्धारको लागि काम गर्ने क्षमता र बताइएको उद्देश्य दुबै छ। उहाँ पूर्ण रूपमा विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ - हाम्रो भरोसाको योग्य।
जब हामी परीक्षाहरू, बिरामी, कष्ट र मृत्युको बीचमा छौं, तब हामी विश्वस्त हुन सक्छौं कि परमेश्वर अझै हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो चासो राख्नुहुन्छ र उहाँ सबै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। यो यस्तो जस्तो देखिँदैन, र हामी निश्चित रूपमा नियन्त्रणमा महसुस गर्दछौं, तर हामी विश्वस्त हुन सक्छौं कि भगवान आश्चर्यचकित हुनुहुनेछैन। उसले हाम्रो भलाईको लागि प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक दुर्घटनालाई बदल्न सक्छ।
हाम्रो विश्वास कमाएको छ।
उहाँ हामीसँग प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, हामीलाई छुटकारा दिने करार, हामीलाई अनन्त जीवन दिन, सदाको लागि हामीलाई माया गर्ने। उहाँ हामी बिना हुन चाहनुहुन्न। ऊ भरोसायोग्य छ तर हामीले उसलाई कसरी लिने? के हामी चिन्तित छौं? के हामी उहाँको प्रेम पाउन लायकको हुन संघर्ष गरिरहेका छौं? वा हामी उहाँमाथि भरोसा गर्छौं?
हामी आफैंमा असफल हुनेछौं। आफैंमा, सूर्य पनि असफल हुनेछ। केवल आशा परमेश्वरमा छ, जससँग सूर्य भन्दा ठूलो शक्ति छ, ब्रह्माण्ड भन्दा ठूलो शक्ति, जो समय र ठाउँ भन्दा बढी विश्वासी छ, हामीलाई प्रेम र विश्वासले भरिएको छ। हाम्रो मुक्तिदाता येशूमा हामी पक्का आशामा छौं।
विश्वास र विश्वास
त्यसोभए विश्वास के हो र यो कसरी "सत्य होल्डिंग" भन्दा फरक छ? मलाई लाग्छ यसको सरल व्याख्या भनेको विश्वास बचत हो। हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौं हाम्रो ख्याल राख्नु, खराबको सट्टा राम्रो गर्नु, हामीलाई अनन्त जीवन दिन। विश्वासको अर्थ हो, परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर जान्नुहुन्छ कि उहाँ भलो हुनुहुन्छ, कि उहाँसँग आफूले चाहेको कुरा गर्ने शक्ति छ, र भरोसा गर्नुहुन्छ कि त्यो शक्ति उहाँ हाम्रोलागि उत्तम कुरा गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ। ट्रस्टको अर्थ एक इच्छुकता हो जुन हामी यसलाई स्वीकार्छौं र यसलाई पालन गर्न तयार हुन्छौं - डरको कारण होइन तर प्रेमबाट। यदि हामी भगवानमा भरोसा गर्छौं भने हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौं।
हामी के गर्छौं भन्ने कुरा ट्रस्टले देखाउँदछ। तर काम विश्वास होईन र यसले विश्वास सिर्जना गर्दैन - यो केवल विश्वासको परिणाम हो। यसको मूल कुरा, साँचो विश्वास भनेको येशू ख्रीष्टमा भरोसा राख्नु हो।
भगवानबाटको एउटा उपहार
यस्तो प्रकारको भरोसा कहाँबाट आउँछ? यो त्यस्तो चीज होइन जुन हामीले आफैंबाट बाहिर निकाल्न सक्छौं। हामी आफैंमा यसमा कुरा गर्न सक्दैनौं वा पन्चि and र ठोस केस बनाउन मानव तर्क प्रयोग गर्न सक्दैनौं। हामीसँग सम्भव सबै आपत्तिहरू, परमेश्वरबारे सबै दार्शनिक तर्कहरूको सामना गर्न कहिले पनि समय हुँदैन। तर हामी दिनदिनै निर्णय गर्न बाध्य हुन्छौं: के हामी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्छौं वा गर्दैनौं? ब्याक बर्नरमा निर्णय राख्नु भनेको आफैमा एउटा निर्णय हो - हामी अहिले सम्म उसलाई विश्वास गर्दैनौं।
हाम्रो प्रारम्भिक विश्वास अपरिपक्व विश्वासको लागि सामान्य हो - राम्रो स्थान सुरू गर्न को लागी, तर राम्रो ठाउँ छैन। हामीले हाम्रो विश्वास बढ्नुपर्दछ। एक व्यक्तिले येशूलाई भने:
त्यसोभए विश्वास कहाँबाट आउँछ? यो भगवानबाटको उपहार हो। एफिसी २: us ले हामीलाई भन्दछ कि मुक्ति भनेको एउटा वरदान हो, जसको मतलब हो कि मुक्तिको लागि डोर्‍याउने विश्वास पनि एउटा वरदान हुनुपर्दछ।
यदि उसले हामीलाई उहाँमाथि भरोसा गर्ने क्षमता दिएन भने हामी उहाँमा विश्वास गर्ने छैनौं। पापले मानिसहरूलाई आफ्नो विश्वास र विवेकले परमेश्वरमा विश्वास गर्न वा विश्वास गर्न भ्रष्ट बनाएको छ। यसै कारणले गर्दा विश्वास "काम" होइन जुन मुक्ति पाउन योग्य छ। हामी प्रसिद्धि प्राप्त गर्दैनौं किनकि हामी योग्य छौं - विश्वास भनेको केवल उपहार प्राप्त गर्नु हो, उपहारको लागि धन्यवादी हो। परमेश्वरले हामीलाई उपहार प्राप्त गर्न, उपहारको आनन्द लिन सक्ने क्षमता दिनुहुन्छ।
भगवानले हामीमाथि विश्वास गर्ने राम्रो कारण छ किनकि त्यहाँ कोही हुनुहुन्छ जो विश्वास गर्न सक्ने छ र उहाँद्वारा मुक्ति पाउनुहुनेछ। हाम्रो विश्वास उनको छोरामा आधारित छ जो हाम्रो उद्धारको लागि मासु बन्नुभयो। हामीसित विश्वास गर्ने राम्रो कारण छ, किनकि हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ जसले हाम्रो निम्ति मुक्ति किन्नुभएको छ। उसले सबै कुरा गर्यो जुन आवश्यक छ, एक पटक र सबैको लागि, हस्ताक्षर गरिएको, छाप लगाइएको र वितरित। हाम्रो विश्वासको एउटा दृढ आधार हो: येशू ख्रीष्ट।
सुसमाचारको शब्दले हामीलाई येशूको बारेमा बताउँछ, परमेश्वरको वचन, र पवित्र आत्माले यो शब्द हामीलाई ज्योतित गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ र कुनै न कुनै तरिकामा हामीलाई यो शब्दमा आफूलाई सुम्पन दिन्छ। यसलाई कहिलेकाँही "पवित्र आत्माको गवाही" भनेर पनि चिनिन्छ, तर यो अदालतमा साक्षीको रूपमा हुँदैन जसलाई हामी प्रश्नहरू सोध्न सक्छौं।
यो एक आन्तरिक स्विच जस्तै हो जुन परिवर्तन भइरहेको छ र हामीलाई प्रचार गरिएको सुसमाचार स्वीकार्न अनुमति दिँदैछ। यो राम्रो लाग्छ; यद्यपि हामीसँग अझै प्रश्नहरू हुन सक्छन्, हामी विश्वास गर्दछौं कि हामी यो सन्देश मार्फत बाँच्न सक्छौं। हामी यसमा हाम्रो जीवन निर्माण गर्न सक्छौं, हामी यसमा आधारित निर्णयहरू लिन सक्छौं। यो बुझ्छ। यो सबै भन्दा राम्रो संभव विकल्प हो। परमेश्वरले हामीलाई उहाँमाथि भरोसा गर्ने क्षमता दिनुहुन्छ। यसले हामीलाई विश्वासमा बढ्ने क्षमता पनि दिन्छ। विश्वासको भण्डार एउटा बीउ हो जुन बढ्छ। यसले शक्ति र हाम्रो दिमाग र भावनाहरूलाई अधिक र अधिकको सुसमाचारको बुझ्नको लागि सक्षम गर्दछ। उहाँ हामीलाई येशू ख्रीष्टमार्फत आफूलाई प्रकट गरेर परमेश्वरबारे अझ बढी बुझ्न मदत गर्नुहुन्छ। पुरानो नियमको तस्वीर प्रयोग गर्न, हामी परमेश्वरसँग हिंड्न थाल्छौं। हामी उहाँमा बाँचिरहेका छौं, हामी उहाँमा विश्वास गर्छौं, हामी उहाँमा विश्वास गर्छौं।
तर धेरैजसो इसाईहरू कहिलेकाँही आफ्नो विश्वाससँग संघर्ष गर्दछन्। हाम्रो विकास जहिले पनि सहज र स्थिर हुँदैन - यो परीक्षणहरू र प्रश्नहरू मार्फत हुन्छ। केहि को लागी, त्रास शोक वा गम्भीर पीडाको कारण शंका उत्पन्न हुन्छ। अरूहरूका लागि यो समृद्धि वा राम्रो समय हो जुन भगवानबाट भौतिक चीजहरूमाथि भरोसा राख्ने प्रयास गर्दछ। हामी मध्ये धेरैले हाम्रो विश्वासका लागि दुबै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्नेछौं।
यस्तो देखिन्छ कि विश्वासको सब भन्दा ठूलो शत्रु भनेको जब सबै चीज सजीलो हुन्छ। मानिसहरू विश्वास गर्न लोभ्याउँछन् कि उनीहरूको बौद्धिक क्षमताको आधारमा उनीहरूले यति धेरै उपलब्धि हासिल गरे। तिनीहरू परमेश्वरमा भर पर्नको लागि आफ्नो बचकाना दृष्टिकोण गुमाउँछन्। तिनीहरू भगवानको सट्टामा के छ उहाँमाथि भर पर्दछन्।
गरीब मानिसहरू अझ राम्रा स्थितिमा छन् भनेर यो जान्न सक्छन् कि यस ग्रहको जीवन प्रश्नहरु द्वारा भरिएको छ र भगवान कम्तिमा पनि प्रश्न गरीएको छ। तिनीहरू उहाँमाथि विश्वास गर्छन् किनकि सबै कुरा अविश्वसनीय साबित भएको छ। पैसा, स्वास्थ्य र साथीहरू - ती सबै अस्थिर छन्। हामी तिनीहरूमा भर पर्न सक्दैनौं।
वृद्धि को भाग
यद्यपि हामी कहिलेकाँही श doubts्काका साथ लड्छौं। यो विश्वासमा बढ्ने प्रक्रियाको हिस्सा हो, जीवनमा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्न सिकेर। हामी छनौटहरू देख्दछौं जुन अगाडि नै छन्, र फेरि हामी परमेश्वरलाई सबैभन्दा उत्तम समाधानको रूपमा छान्छौं।
शताब्दीयौं अघि ब्लेज पास्कलले भनेजस्तै, हामी अरू कुनै कारणले विश्वास गर्दैनौं भने पनि हामीले कम्तीमा विश्वास गर्नुपर्छ किनकि परमेश्वर सबैभन्दा उत्तम बाजी हुनुहुन्छ। यदि हामी उहाँलाई पछ्याउँछौं र उहाँ अवस्थित हुनुहुन्न भने हामीले केही पनि गुमाएनौं। तर यदि हामी उहाँलाई पछ्याउँदैनौं र उहाँ अवस्थित हुनुहुन्छ भने हामीले सबै कुरा हरायौं। यसैले हामी जीवित रहन र उहाँ ब्रह्माण्डमा पक्का वास्तविकता हुनुहुन्छ भन्ने बिचार गरेर परमेश्वरमा विश्वास ग if्यौं भने हामीले हराउनु पर्ने सबै कुरा छैन।
जब हामी आध्यात्मिक परिपक्वतामा बढ्दै जान्छौं, हामी प्रायः हाम्रा पापहरू र पापीपनहरूप्रति सजग हुन थाल्छौं। हामी जान्दछौं कि हामी परमेश्वरबाट कति टाढा छौं, र त्यसले हामीलाई श doubt्का गर्न सक्छ कि परमेश्वरले हामी वास्तवमै भ्रष्ट मानिसहरुको लागि आफ्नो छोरालाई मर्न पठाउनुहुनेछ।
शंका जतिसुकै ठूलो भए पनि त्यसले हामीलाई ख्रीष्टमाथिको ठूलो विश्वासतर्फ फर्किनुपर्दछ, किनकि उहाँमा मात्र हामीसँग अवसर छ। फेर्नका लागि अरू कुनै ठाउँ छैन। उसको बोली र व्यवहारमा हामी देख्छौं कि उहाँ हाम्रो पापको लागि मर्नु अघि हामी कत्ति भ्रष्ट छौं ठ्याक्कै थाहा थियो। हामी आफैले जति राम्ररी देख्छौं, हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा समर्पण हुनुपर्ने आवश्यकता देख्छौं। केवल उहाँ हामीलाई आफैंबाट बचाउनको लागि पर्याप्त हुनुहुन्छ, र केवल उसले हाम्रो श from्काबाट मुक्त गर्दछ।
यो विश्वासको आधारमा हामी परमेश्वरसँग फलदायी सम्बन्ध राख्छौं। हामीले प्रार्थना गर्दैछौं भन्ने विश्वास गरेर हामी उपासना गर्दैछौं भन्ने विश्वास गरेर, उपदेश र समुदायमा हामीले उहाँको वचन सुनेका छौं भन्ने विश्वास गरेर। विश्वासले हामीलाई पिता, पुत्र र पवित्र आत्मासँगको सहभागितामा भाग लिन सक्षम गर्दछ। विश्वासको साथ हामी हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट मार्फत परमेश्वरप्रति आफ्नो वफादारी व्यक्त गर्न सक्षम छौं, हाम्रो हृदयमा काम गर्ने पवित्र आत्माद्वारा।
यो विश्वास छ कि हामी अरू मानिसहरूलाई प्रेम गर्न सक्छौं। विश्वासले हामीलाई उपहास र खण्डनको डरबाट मुक्त गर्दछ। हामी अरूलाई उनीहरूले के गर्छन् भन्ने चिन्ता नगरिकन हामी उनीहरूलाई प्रेम गर्न सक्दछौं किनकि हामीलाई इमानदार भई इनाम दिन ख्रीष्टमा हामी भरोसा राख्छौं। परमेश्वरमा विश्वास गरेर हामी अरूलाई उदार हुन सक्छौं।
परमेश्वरमा विश्वास गरेर हामी उहाँलाई हाम्रो जीवनमा पहिलो स्थान दिन सक्छौं। यदि हामी भन्छौं कि परमेश्वर उही नै हुनुहुन्छ जस्तो उहाँ असल हुनुहुन्छ भने, हामी उहाँलाई अरू सबै कुरा भन्दा पनि मूल्यवान तुल्याउनेछौं र हामी उहाँबाट मागेका त्यागहरू गर्न हामी तयार हुनेछौं। हामी उहाँमा भरोसा राख्छौं, र यो विश्वासद्वारा हामी मुक्तिको आनन्द अनुभव गर्नेछौं। इसाई जीवन सुरूदेखि अन्त सम्म परमेश्वरमा भरोसाको कुरा हो।